Python mugadziri anotsiva basa kubva kuDropbox | Linux Vakapindwa muropa
Guido Van Rossum anga achishanda kuDropbox kweanopfuura makore matanhatu.
Musiki wePython rega basa rako pa Dropbox mushure memakore matanhatu nehafu ekushanda mukambani. Iyo gore rekuchengetera sevhisi inonyanya kuvakirwa pamutauro wechirongwa.
Guido van Rossum anga asiya hutungamiriri gore rapfuura mukugadzirwa kweimwe yemitauro inonyanya kuzivikanwa.
1 Hukama pakati pemusiki wePython neDropbox
2 Basa raGuido Van Rossum
Hukama pakati pemusiki wePython neDropbox
Iyo kambani yakanga yamubhadhara mu2013 nekuti Dropbox ine angangoita mamirioni mana mitsara yekodhi yakanyorwa muPython uye ndiwo mutauro unoshandiswa zvakanyanya kune ako ekumashure masevhisi uye desktop desktop.
Munguva pfupi yapfuura, zvakadaro, Dropbox yakapa nzira kune mimwe mitauro yakaita seGo, TypeScript, uye Rust.
Rossum akagovana zvaakawana paakasvika kuDropbox:
Paive nenhamba diki yevakangwara kwazvo, vadiki kwazvo macoders avo vakaburitsa yakawanda kwazvo yakangwara kodhi iyo ivo chete vaigona kunzwisisa. Iyo ingangoita mafungiro akakodzera kana iwe uri muzvinabhizimusi mudiki.
Musiki wePython akatsanangura iyi nzira yekushanda se iyo "kodhi yemukomana tsika."
Zvisinei, sezvo kambani yakakura, mainjiniya matsva vakatadza kunzwisisa smart code asi "ipfupi uye yakavanzika" yakanyorwa na uye yevagadziri vekare.
Basa raVan Rossum raive rekuita kuti vachinjire kune tsika ye "maintainable code"
Van Rossum akatsanangura mashandiro aakaita kuti tsika ishanduke nenzira iyi:
Kana mumwe munhu akandibvunza, ndakapa vanhu maonero angu ekuti iniYakachengetedzwa kodhi yakakosha kupfuura smart kodhi.
Kana ini ndikawana yakangwara kodhi yaive yakanyanya kuvanzika, uye ndaifanirwa kuita imwe gadziriso pairi, ndingangozvinyorazve. Saka ini ndakatungamira nemuenzaniso, uye zvakare nekutaura kune vamwe vanhu.
Dropbox inobvuma kuti iwe wakabatsira kunatsiridza maitiro ekambani yekuyedza kodhi sechikamu cheyakaenderera nzira dzekubatanidza uye nebasa rayo rakakosha mukubatsira mainjiniya kunzwisisa kuti nei kukundikana kwakaitika.
Chiitiko chakakosha chebasa rake mugore rekuchengetedza basa raive kugadzirwa kwechikwata cheMypy.
Mypy ndeye vhura sosi static mhando yekutarisa. Iyi purojekiti yakatanga kugadzirwa naJukka Lehtosalo, uyo Rossum akashanda kukambani iyi. Dropbox inoshandisa Mypy kubata Python kodhi pamwero mukuru. Guido akaumba iyo mypy timu muna 2015 kubatsira geza rakakura reDropbox Python codebase.
Guido Van Rossum aivewo akatsigira kusimudzira marongero ekubatanidzwa kwemadzimai.
Basa raGuido Van Rossum
Guido Van Rossum akaberekerwa muNetherlands muna Ndira 31, 1956. Ane degree raTenzi mumasvomhu uye sainzi yemakomputa iyo yaakawana kuYunivhesiti yeAmsterdam.
Mabasa ake anosanganisira mipiro kune BSD chirongwa chirongwa, uye mukuvandudza kweABS programming mutauro. Akatorawo chikamu mumapoka anoshanda pane iyo HTML standard.
Pakati pemasangano nemakambani aakashanda nawo, ndeaya:
Centrum Wiskunde & Informatica (Iyo Netherlands).
US National Institute of Standards uye Tekinoroji.
Corporation yeNational Research Initiatives (USA)
Zope Corporation (USA)
Elementary Chengetedzo (USA)
Basa rakakurumbira raGuido Van Rossum ndiyo mutauro wePython. Akazvarwa senzira yekuwana nguva mukati memazororo eKisimusi, nhasi ndiyo imwe yemitauro inonyanya kuzivikanwa munyika.
Python inobata iyo yekutanga nzvimbo mune yegore rese chinzvimbo chemitauro mitauro Yakakurumbira IEEE Spectrum.
Ichi chinzvimbo chinotsvaga kubatsira vanogadzira kuti vanzwisise kufarirwa kwemitauro munyika musina munhu anoziva kuti ndeapi mapurogiramu ari kushandisa malaptop avo.
Python iri en nzvimbo yekutanga kubvira 2017. Mune chiyero chekupedzisira, Java, C uye C ++ vaive kumashure zvakanyanya.
Hazvisi pachena kwandiri kuti vanhu vanoshanda saGuido Van Rossum vanogona kuramba vari pamudyandigere kwenguva refu. Zvingangodaro, mumwedzi mitanhatu tichava nemumwe mutauro wechirongwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Python musiki anotsiva basa kubva kuDropbox
Kune mashoma makomendi pane yako blog asi ine zvinonakidza zvinyorwa senge iyi naGuido Van Rossum uye Python